Istaraatijiyadaha Teknolojiyadeed ee ugu sarreeya 3 ee daabacayaasha 2021 | Martech Zone
Sannadkii la soo dhaafay wuxuu ku adkaaday daabacaadda. Marka la eego fowdada COVID-19, doorashooyinka, iyo jahwareerka bulshada, dad badan ayaa cunay warar iyo madadaalo badan sanadkii la soo dhaafay si ka badan sidii hore. Laakiin shakiga ay ka qabaan ilaha bixinaya macluumaadkaas ayaa sidoo kale gaadhay heerkii ugu sarreeyay abid, maadaama ay kacsanaanta macluumaadka khaldan ku riixay kalsoonida warbaahinta bulshada iyo xitaa makiinadaha raadinta si ay u duubaan hoose.
Dhibaatada ayaa leh daabacayaal dhammaan noocyada mawduucyada halgamaya si ay u ogaadaan sida ay dib ugu soo ceshan karaan kalsoonida akhristayaasha, ugana sii mashquulin karaan isla markaana dhaqaajin karaan dakhliga. Arimaha murugsan, waxaas oo dhami waxay yimaaddeen wakhti ay daabacayaashu sidoo kale la tacaalayaan dhimista cookies-ka saddexaad, kuwaas oo in badan oo ka mid ahi ku tiirsanaayeen dhagaystayaasha bartilmaameedsanaya inay gudbiyaan xayeysiisyada ilaaliya laydhadhka iyo server-yada oo shaqaynaya.
Markaan guda galno sanad cusub, mid aan dhamaanteen rajeyneyno inuu noqon doono mid buuq yar, daabacayaashu waa inay u jeestaan ​​teknolojiyadda u sahlaysa inay si toos ah ugula xiriiraan dhagaystayaasha, si ay uga gooyaan bartamaha warbaahinta bulshada ayna u qabsadaan ugana faa'iideystaan ​​xog badan oo adeegsadayaasha kooxda koowaad. . Halkan waxaa ah seddex xeelado tiknoolaji ah oo siin doona daabacayaasha gacanta sare si ay u dhisaan istaraatiijiyaddooda xogta dhagaystayaasha ayna joojiyaan ku tiirsanaanta ilaha saddexaad.
Istaraatiijiyadda 1: Shakhsiyadeynta Miisaanka.
Daabacayaashu xaqiiqda kama filan karaan in isticmaalka ballaaran ee warbaahinta uu sii socon doono. Macaamiisha ayaa ku adkaaday macluumaadka xad dhaafka ah, qaar badana waxay u gooyeen caafimaadkooda maskaxeed dartiisa. Xitaa madaddaalada iyo warbaahinta qaab nololeedka, waxay umuuqataa in dad badani ay dhagaystayaashu hadda gaareen heer dhammaystiran. Taasi waxay ka dhigan tahay daabiciyayaashu waxay u baahan doonaan inay raadiyaan siyaabo ay ku soo jiitaan dareenka macaamiisha oo ay uga ilaaliyaan inay soo noqdaan.
Soo gudbinta waxyaabaha sida shakhsiga ah loo qoondeeyay waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee taas lagu sameeyo. Wax badan oo qas ah, macaamiisha ma haystaan ​​waqti ama dulqaad ay ku kala saaraan waxaas oo dhan si ay u helaan waxa ay dhab ahaan doonayaan inay arkaan, sidaa darteed waxay u janjeerayaan xagga meelaha wax ka qoraya iyaga. Adoo siinaya macaamiisha wax badan oo ay rabaan, daabacayaasha ayaa dhisi kara kalsooni badan, Xiriirrada muddada-dheer ee lala yeelanayo macaamiisha kuwaas oo ku xirnaan doona bixiyeyaasha waxyaabaha ay jecel yihiin si aysan waqtigooda ugu lumin waxyaabaha macno darrada ah ee aysan dan ka lahayn.
Istaraatiijiyadda 2: Fursado badan oo loogu talagalay Teknolojiyada AI
Dabcan, u gudbinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee macaamiil kasta waa wax aan macquul aheyn iyada oo aan la helin otomatik iyo tikniyoolajiyad sirdoon farsamo si loo caawiyo. Aaladaha AI hadda waxay la socon karaan dabeecada dhagaystayaasha goobta-qasabnadooda, raadintooda iyo kaqeybqaadashadooda kale-si ay ubartaan dookhyadooda una dhisaan garaaf aqoonsi oo sax ah shaqsi kasta oo adeegsada.
Si ka duwan cookies, xogtan waxay si toos ah ugu xiran tahay shaqsi ku saleysan cinwaanka emaylkooda, iyagoo siinaya tiro aad u sax ah, sax ah oo lagu kalsoonaan karo oo ah sirdoonka dhagaystayaasha. Kadib, markii isticmaalehaasi mar kale soo galo, AI wuxuu aqoonsan yahay adeegsadaha isla markaana wuxuu si toos ah ugu adeegaa waxyaabaha taariikh ahaan ku khiyaaneeyey hawlgelinta. Tiknoolajiyad isku mid ah ayaa sidoo kale u oggolaanaysa daabacayaasha inay si otomaatig ah ugu diraan nuxurkan shakhsi ahaaneed macaamiisha iyada oo loo marayo marinno kala duwan, oo ay ku jiraan emayl iyo ogeysiisyo riix ah. Waqti kasta oo adeegsadehu uu gujiyo waxyaabaha ku jira, nidaamku wuxuu noqdaa mid caqli badan, oo wax badan ka barto waxa ay doorbidayaan si loo hagaajiyo hagaajinta shakhsiga.
Istaraatiijiyadda 3: Istaraatijiyadaha Xogta ee loo Leexiyay Ujeedka loo Leeyahay
Xisaabinta sida loo dheellitiro luminta buskudku waa qayb ka mid ah dagaalka. Muddo sanado ah, daabacayaashu waxay ku tiirsanaayeen warbaahinta bulshada si ay u qaybiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ayna u dhisaan bulsho ka mid ah macaamiisha ku hawlan. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka ku yimid siyaasadaha Facebook, nuxurka daabacayaasha ayaa mudnaanta la siiyay, haddana, waxay sidoo kale afduub ku haysataa xogta dhagaystayaasha. Maaddaama booqasho kasta oo websaydh ah oo ka timaadda Facebook ay tahay taraafikada gudbinta, Facebook keligiis ayaa haya xogta dhagaystayaasha, taas oo macnaheedu yahay daabacayaashu ma haystaan ​​qaab ay wax uga bartaan dookhyadan booqdayaasha iyo danaha ay leeyihiin. Natiija ahaan, daabacayaashu waa kuwo aan awood u lahayn inay ku bartilmaameedsadaan waxyaabaha shakhsi ahaaneed ee aan ognahay inay dhagaystayaashu rabaan.
Daabacayaashu waa inay raadsadaan qaabab ay uga weecdaan ku tiirsanaanta taraafikada gudbinta dhinac saddexaad oo ay dhisaan keydkooda xogta dhagaystayaasha. U adeegsiga 'xogtan' 'si loogu bartilmaameedsado dhagaystayaasha waxyaabo shakhsi ahaaneed ayaa si gaar ah muhiim u ah kalsoonida Facebook iyo barnaamijyada kale ee bulshada. Daabacadaha aan hirgelin siyaabaha loo ururiyo loona adeegsado xogta dhagaystayaasha si ay u soo gudbiyaan waxyaabo badan oo shaqsi ahaaneed ayaa lumin doona fursadaha ay ku gaaraan oo ay kula xiriiraan akhristayaasha isla markaana u kaxeeyaan dakhliga.
In kasta oo aan dhammaanteen isku dayeyno inaan ogaanno sida loo maro "caadiga cusub," hal cashar ayaa si ballaaran loo caddeeyay: ururada qorsheeya waxa lama filaanka ah, ee ilaaliya xiriirada adag ee hal-hal-qof ee macaamiishooda, ayaa aad uga fiican jaaniska cimilada wixii isbeddel ah ee yimaada. Daabacayaasha, taasi waxay ka dhigan tahay yareynta ku tiirsanaanta dhinacyada saddexaad ee u adeegaya ilaaliyeyaal u dhexeeya adiga iyo macaamiishaada iyo halkii aad ka dhisi laheyd oo aad ka faa'iideysan lahayd xogta dhagaystayaashaada si aad u gaarsiiso waxyaabaha shakhsiga ah ee ay filayaan.
Tags: aifarsamada macmalka ahDataxeeladaha xogtaFacebookshakhsi ahaaneedpublisherPublishingistaraatijiyad farsamoTechnologyistaraatijiyad tiknoolajiyadeed